တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ဆင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို လျှော့ချသွ? - Yangon Media Group
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ကာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို လျှော့ချသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့လေးဖွဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် Peace Commission ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်က ပြောဆိုသည်။
”တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အပြန်အလှန်အပြစ်တင်နေခြင်း၊ ဝေဖန်နေခြင်း၊ ပြောဆိုနေ ခြင်းဖြင့် ပြဿနာ၏အဖြေကိုမရနိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ပြီး အခြေအနေအချိန်အခါနှင့် သင့်လျော်သည့်ကိစ္စများကို နှစ်ဖက်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးဟာ မိမိတို့က အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားနေတဲ့ လမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။ ဒီကမှတစ်ဆင့် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပြီး လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို လျှော့ချသွား ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရဘက်မှ PC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(ုKIO)၊ တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်အရေးအဖွဲ့(PSLF/ TNLA)၊ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့(ULA/AA)၊ ကိုး ကန့်အဖွဲ့(MNDAA ) စသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် လေ့လာသူများအဖြစ် ‘ဝ’ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ(UWSP)၊ ရှမ်း ပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP)နှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့(PCG) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့ရှိ မူဆယ်-နမ့်ခမ်း နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးကုန်သည်များအသင်းရုံးတွင် ဧပြီ ၃ဝ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသည် တိုးတက်မှုများရရှိခဲ့ပြီး တပ်မတော်၏ အပစ်ရပ်ကာလသတ်မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း အထောက်အကူပြုမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော် ဌေးက ပြောဆိုသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း နှစ် ဖက်သံသယများကို ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီး မေလတတိယပတ်ခန့်တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံနိုင်ရန်အတွက် ယာယီသဘောတူညီခဲ့ကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ပြောဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေ သံအမတ်ကြီးထံ စာရေးသား တောင်းဆိုခဲ့သော ရှစ်နှစ်အရွယ် မြန်မာကေ??